▷ Grand Tour Carnage A Trois pụrụ iche nwere ụbọchị mwepụta na Amazon Prime Video - 【 Comparison】 2022
Grand Tour Carnage A Trois Special nwere ụbọchị mwepụta na Amazon Prime Video
Oge Nlegharị Anya 1
Amazon Prime Video (Video na-achọ); James May, Jeremy Clarkson, Richard Hammond (Ndị na-eme ihe nkiri)
Ihe omume ikpeazụ nke oge Grand Tour oge anọ enwetala ụbọchị ntọhapụ, yana ụgbọala na-adọkpụ zuru ezu.
Ndị otu atọ na-eguzosi ike n'ihe nke Jeremy Clarkson, James May, na Richard Hammond ga-alaghachi na Amazon Prime Video maka ụgbọ ala ndị ọzọ na Disemba 17. N'oge a, ha ga-amalite njem site n'ugwu Wales ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri Bekee.
A na-akpọ Carnage A Trois (ọ bụ pun na okwu French maka atọ, n'ụzọ), pụrụ iche ga-elekwasị anya na ụgbọ ala ndị na-adịghị ahụkebe na ndị na-adịghị ahụkebe sitere na France. Nke a bụkwa nke abụọ n'ime ihe omume abụọ emere kpamkpam n'oge mkpọchi a, nke pụtara na ndị otu ahụ agaghị aga France.
Can nwere ike ịlele ụgbọala na-adọkpụ n'okpuru.
Dị ka ị na-ahụ na foto a, ọ bụ ihe dị mma ịtụ anya karịa otu ara ara, esemokwu na mgbukpọ site n'aka ndị na-egosi nzuzu Britain ama ama. Tinyere ụgbọala na-adọkpụ, Amazon wepụtakwara nkọwa nkọwa maka ihe omume na-esote.
N'ime ihe nke abụọ a pụrụ iche, ndị atọ ahụ na-emikpu onwe ha n'ime ụwa dị iche iche nke omenala ụgbọ ala French ", anyị nwere ike ịgụ. "N'ime njem dị egwu nke na-amalite n'ugwu Wales, ha na-akwado maka ịrị elu na-emetụ n'ahụ, na-ekpochapụ bọmbụ, ụgbọ ala ụgbọ ala, helikopta stunts na agbụrụ kacha atọ ụtọ nke ndụ ha tupu ha eruo n'elu. Ọwa maka mgbụsị akwụkwọ ochie na-adọrọ adọrọ. Na French auteur cinema ofe «.
A-ahụkarị nwunye nke Ukwu Tour, Ya mere.
Kedu maka ihe omume ga-eme n'ọdịnihu?
Banyere usoro mmalite nke akwadoro maka njem nlegharị anya Grand Tour, ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ ebutela nnukwu mmebi injin.
May gwara BT na mbido afọ a na ndị na-emepụta ihe nkiri ahụ chere na ọ ka mma ịgbapụ na UK ma na-ebuga ya mgbe niile karịa ikwe nkwa ala na ịnapụta ihe ọ bụla, nke na-akọwa mkpebi iji belata njem nke ihe ọhụrụ a n'ime British. ókè-ala.
Atụmatụ mbụ ịse ihe nkiri na Russia, maka post-A Massive Hunt pụrụ iche na 2020, kwụsịrị n'afọ gara aga ma ka na-anọgide na 2021. May enyela mmelite, na-agwa Radio Times na ihe omume ahụ ga-emecha pụta. .
Ọ sịrị, "Anyị ga-etinye ya na kọbọd ugbu a." "Ma anyị ga-ahapụ ya otu ụbọchị ma mechaa ya."
Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-anụ ụtọ ihe nkiri mba Carnage A Trois, nke dabara Amazon Prime Video na Disemba 17, naanị n'oge ekeresimesi.
Ihe kacha mma Amazon Prime na-eme n'ụbọchị